Kooxa isku soo haddhay koobka Qaaradda Yurub – Xeernews24
Waxaa la soo afjaray wareega hore ee tartanka koobka Qaramada Yurub ee EURO 2016 kaas oo si xiiso leh uga socda garoomo ku yaala gudaha dalka Faransiiska . Dalal dhowr ah ayaa si dirqi ah ku soo baxay halka qaar kalana boorsooyinkooda ka qaateen dalka Faransiiska .
Tartankaan ayaa markii hore waxaa ka qeyb galayay 24-Dal oo loo kala qeeybiyay 6 Guruub balse iminka ayaa waxaa iskugu soo haray 16-Xul oo qaarkood aad u adag yihiin halka kuwa kale ay ku soo baxeen kaalinta 3-aad ama dhibco yar oo aanan meel fog lagu gaari karin .
Kulanka ugu adag ee xulalka isku dhacay ayaa durbadiiba waxa uu noqday wadamada Talyaaniga iyo Spain oo ka soo kala baxay Guruubyada (D & E) . Xulalkaan ayaa wada ciyaari doona galabta Isniinta . Wadamada Boorsooyinkooda ka qaatay dalka Faransiiska ee ka haray koobka EURO 2016 ayaa waxa ay kala yihiin Sweden , Austria , Turkiga , Austria, Russia , Romania , Ukrain iyo Albania .
Labo maalin oo nasasho ah ka dib Xulalka 16-ka ah ee u soo baxay wareega labaad ee koobka Qaramada Yurub ayaa waxeey fooda is dari doonaan maalmaha Sabtida , Axada iyo Isniinta waxeeyna isku arki doonaan qaabkaan hoose .
Wales Vs North Irland
France Vs Irland
Belguim Vs Hungry
Qisadi Saamiya iyo Xaamud Maanta iyo aftida laga qaadi dadweyne Ingriiska